YeToyota Tacoma Super Crew - Changzhou Deao Vehicle Technology Co, Ltd.
TPE MUTUNGAMIRI GREEN CAR MAT
YEMAHARA TOYOTA TACOMA SUPER CREW
Mhando dzinotumirwa kune
nyika dzinopfuura gumi pasi rese
Mateki emota anogona kuiswa zvakananga
pamota yekutanga mota
Gondo rinocheka nzara uye kadhi gomba dhizaini
pazasi inogona kusimbisa mateti emota
uye haizotsvedza pakutya nekukurumidza uye kwakachinjika
kuve nechokwadi chekutyaira kwakachengeteka.
TPE ZVOKUVIMBIRA KUDZIVIRIRA ZVINOKOSHA
Hauna chero zvinokuvadza zvinhu. Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa pasi peviri zviyero zve ISO9001 uye FMVSS302 muUnited States.
Inogona kuvimbiswa zvakakwana kunyangwe patembiricha dzakakwirira.
Inokodzera zvakakwana coraner dzese dzemotokari
kuitira kuti mateti emota uye mota zvinyatsobatanidzwa
3D yepamusoro-parutivi dhizaini, kumucheto kwakaringana
kudzivirira matope nejecha kupinda
Musono mumwe-chidimbu Kuumbwa
uye isiri-tsvimbo yekupora kurapwa
Sukurudza mumaminitsi matatu chete
Iwo matafura emota akapfava ari nyore kwazvo
Yakabatanidzwa nekukombama kwemuviri, isina musono, yakatsaurirwa mota dzakakosha
Pazasi rivet dhizaini, iwo mateki emota haazotsvedza uye kupamha iyo yekuwedzera kana kubhururuka pasi pekutyaira kwakanyanya
MOMONI KUUMBA UYE Midziyo
Jekiseni Kuumbwa muchina mune imwe,Fully michini Kuumbwa
Kugadzirwa kwekugadzira kwakakwirira
Yakaganhurirwa neichi chiitiko, iyo kukora kweblister mat is asymmetry, yakaoma zvinhu
Kusona hakuna kukodzera uye hakuenderane nemotokari yekutanga
Texture padhuze nepurasitiki, nyore kutsvedza
Iyo yakavambwa muna 2016. Iyo fekitori iri muChangZhou, Jiangsu, China. Iyo fekitori inovhara nzvimbo inosvika zviuru makumi maviri zvemamirimita. Iyo inyanzvi yekugadzira auto accessories inosanganisa kukura, kugadzirwa uye kutengesa.
Iko kushandiswa kweazvino hutano uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvinhu zvinovimbisa hutano nechengetedzo maitiro uye kusimba kwechigadzirwa, chakachengeteka uye chisiri chepfu, chinogona kushandiswa kakawanda, uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kunosangana nemamiriro ekudzivirira ezvakatipoteredza eEurope neAmerica nyika.
Iyo kambani ine akati wandei ane ruzivo yepamusorosoro matarenda mu auto indasitiri, uchishandisa akanyanya kugadzirwa tekinoroji-jekiseni kuumbwa tekinoroji, ine mashanu ekugadzira mashopu, 9 jekiseni kuumbwa michina, zvakakwana michini yakabatanidzwa kuumbwa, yakakwira kugadzirwa kushanda.
Kubvira pakagadzwa, isu takatora chikamu mukuratidzira kwakasiyana siyana
muKorea, Dubai, Shanghai Frankfurt, Canton Fair, nezvimwe.
ZVITSAUKO ZVINopfuura mazana maviri PATENT CERTIFICATES
Kuseri kwechimiro chechigadzirwa chimwe nechimwe,
Iine chitarisiko chayo patent.